गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, नीति विपरीत आईजिपीले किन दिए ‘इन्काउन्टर’ को आदेश ? - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, नीति विपरीत आईजिपीले किन दिए ‘इन्काउन्टर’ को आदेश ?
असार १२, काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छन् । पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ सरकारी नीति अनुसार भएको हो त ?
यो खबर हामीले काठमाडौँपाटीबाट लिएका हौ । गृहमन्त्री बादलले संसदमा जवाफ दिंदा प्रहरीमाथि प्रहार भएपछि प्रतिरक्षाका क्रममा गोली चलाउंदा कुमार पौडेलको मृत्यु भएको जवाफ दिने गरेका छन् । तर प्रहरीले गलत गरेको भित्रभित्रै महसूस गरेका गृहमन्त्री बादल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसंग रुष्ट भएका छन् ।